Shan qof oo ku dhintay shil gaari oo xalay ka dhacay gobolka Karkaar – Radio Daljir
Shan qof oo ku dhintay shil gaari oo xalay ka dhacay gobolka Karkaar
Abriil 8, 2010 12:00 b 0
Qardho Apr, 08 – Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo xalay ka dhacay meel 30 KM dhinaca Waqooyi ka xigta magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar iyadoo 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah labo gabdhood oo walaalo ah oo da?doodu ka yar tahay 10 sano, waxaana meydkii iyo dhaawacii dadkaasi loo qaaday magaalada Qardho si meydkana loo aaso dhaawacana loo dabiibo.
Shilka gaari ayaa yimid ka dib markii ay isku dhaceen labo gaari oo nooca xamuulka qaada ah kuwaasi oo kale yimid magaalooyin Bossaso iyo Galkacyo, gaariga ay dadku ku dhinteen oo ka yimid dhinaca Bossaso ayaa siday ku dhawaad labo boqol oo fuusto oo shidaal ah iyo bagaash kale.
Darawalkii waday gaariga rogmaday ayaa sheegay in gaariga kale uu seedkiisa ugu soo galay taasna ay keentay inuu jidka ka boxo deedna uu qallibo.
Gaari kale oo waaraad ah ayaa isna xalay ku gormaday meel aan ka fogaqyn magaalada Qardho waxaana ku dhaawacmay labo ruux.
Baarbuurta rogmatay ayaa wali yaalla kobtii ay ku rogmadeen maadaama uusan gobolku laheyn wish toosiya gaawaarida.
Taliyaha laanta taraafikada ee gobolka Karkaar ayaa u sheegay idaacadda Daljir inay baarayaan sababaha dhaliyey shilalkaan, wuxuuna intaasi ku daray inuu aad uga xunyahay inaan dhag jalaq loo siin dalab uu horay ugu diray dawladda Puntland oo ahaa in gobolka la keeno wiish la isticmaalo xilliyadaan oo kale.
Shilalka Gawaarida ayaa muddooyinkii damba ka soo yaraanayey deegaanada Puntland, waxaana loo aaneeyaa wadada laamiga oo ah mid khatar badan, darawaliinta oo aan muujin mas?uuliyaddii la rabay iyo gawaarida oo si xad dhaaf ah loo raro.
Muxuyaddiin Hiirad Kaatun
M/weyne Shariif oo lagu eedeeyey in uu hortaagan yahay hawlaha baarlamaanka, diiddan yahayna furitaanka kalfadhiga golaha wakiilada.
Puntland oo qorsheyneysa guluf ka dhan ah burcad badeeda Somalida ah ee ka ugaarta badweynta Hindiya.